Bhegi Yekugezera 4 Inch Centerset Brushed Nickel
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW Yakagezwa Nickel Bathroom Faucet Centerset
WOWOW Yakabhurwa Nickel Bathroom Faucet Centerset
Rated 4.91 Kunze kwe5 yakavakirwa 35 kasitoma ratings
(35 kasitoma wongororo)
Bathroom faucet Yakasungirirwa Nickel yeWOWOW inodhura-inoshanda. Yepamusoro-mhando chigadzirwa chine chimiro chemazuva ano. Tenga yedu yekugezera faucet Yakasarudzika Nickel izvozvi!
2321200 mirairo yekuisa
Bhavhu rekugezesa rakapetwa nickel 2321200
Wagadzirira kudhiraina kana kutedzeredza imba yako yekugezera? KuWOWOW tinotenda kuti kudhiza kana kugadzirisazve imba yako yekugezera kunofanirwa kuitwa nemhando yepamusoro yemidziyo yekushandisa zvakanaka. Uye zvakadaro izvi zvinofanirwa kunge zvichikwanisa kumunhu wese. Kurongedza kana kutsvenesa imba yako yekugezera kazhinji haisi chiitiko chakachipa. Uye nekuda kwebhajeti-zvikonzero kana kusatarisirwa kusangana, mumwe anogona kunge achitsvaga madhiri madiki sezvo apera mubhajeti. KuWOWOW isu tinonzwisisa izvi, uye saka ini ndinoita kuti zvive nyore kutenga yepamusoro-ye-yemusika faucets nemutengo wakaderera. Izvi zvinonzwika sezvisingadaviriki here? Kwete kana iwe ukaverenga nezvedu uye zvigadzirwa zvedu.
WOWOW chinhu chitsva chiri chitsva, chinogadzira zvakanakisa mapombi ekupa zvinhu semabhuruku. Kufananidza marudzi ese ezvigadzirwa uye masitayiti, WOWOW yagara ichipa sarudzo yakasarudzika yemhando faipits kuti ifanane nezvinodiwa zvevatengi vedu vese. Uye sezvaurikuona mune faucet portfolio yeWOWOW, isu takahaya veakanakisa vagadziri kuti vakupe yekugezera accessories ayo anokwana chero dhizaini yekugadzira. Isu tinotenda kuti WOWOW inokupa yakanakisa mutengo-yepamusoro chiyero mumusika nevatengi vekugadzira dhizaini, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, uye zvakadaro pamitengo inodhura.
Yepamberi yekugezera faucet bronze nickel
Iyi yemhando yepamusoro uye ichiripo zvino yekugezesa faucet yakashambadzirwa nickel yeWOWOW inoratidza maviri emawoko ekubata, imwe yemvura inodziya uye imwe yemvura inotonhora. Iyi dhizaini retro inojekesa imba yako yekugezera neakakosha kubata. Sezvaungave iwe uchiziva, imba yekugezera faizets zvakasikwa zvinotaridzika nzvimbo, kunyange zviri zvidiki zvekugezera zvinhu. Neichi chikonzero iwe unokwanisa kupa yakakosha retro kubata kune yako yekugezera, uye kwete kukanganisa maitiro uye kunaka. Iyi yokugezera faucet brutch nickel iri nyore kuibatanidza nemamwe mafa faitts eWOWOW ayo anowanikwa mune imwechete maitiro uye apedza sezviri imba ino yekugezera faucet bramm nickel.
Yakapedzisirwa nickel kupedzisa inoitwa nickel coating iyo yapera nekuimisikidza ne waya waya. Ndicho chikonzero nei ichi chekugezera faucet bronze nickel yakawana yakatarwa mavara. Iyi yekumesa nickel yekupedzisa inopa iyi yekugezera faucet inodziya uye yakasarudzika toni. Kunze kweizvozvo, inogadzira kutarisa kwakasarudzika nemisiyano yayo yechiedza nemimvuri pamusoro peiyi faucet yokugezera. Nekuda kweiyo yakasarudzika yeWOWOW imba yekugezera faucet briny nickel yaisazove kunze kwenzvimbo mune chero nyeredzi shanu hotera kana yakasarudzika dzimba.
Yekutanga-giredhi rekugezera faucet bronze nickel
Unobva waona mhando yeiyi faucet yekugezera kana iwe unayo mumawoko. Hapana chinotsamwisa kunze kwekunge waisa faucet nyowani yekugezera inotanga kudonha mushure menguva pfupi. Uku kurira kwekudonha kunogona kukuita iwe unopenga, kunyanya usiku. Zvino ipapo kazhinji hapana imwe mhinduro kunze kwekutsiva yako yekugezera faucet. Icho chinogona kuve chiitiko chinodhura, uye yako yakachipa yekugezera faucet yakazove isiri yakachipa pakupedzisira. PaWOWOW iwe unodzidza kune rumwe rutivi kuti zvigadzirwa zvemhando yepamusoro hazvireve hazvo kuti zvireve yakakwirira-mutengo zvakare. WOWOW inoratidza kuti iwe unogona kuwana yakakwira mhando pamutengo unodhura. Iyi yokugezesa faucet nickel nickel inopa yakakura mhangura chigadziko, igobvu yesimbi isina chigadziko uye yakasimba kuvakwa. Kugara ndiko chinangwa chikuru apo iyi yekugezesa faucet bramm nickel yeWOWOW yakagadzirwa. Uye izvi ndizvo zvaunozoona.
Yese pombi ye WOWOW yekugezera faucet bronze nickel yaigadzirwa kubva kubhuronzi. Iyi ruoko-yakagadzirirwa imba yekugezera faucet haisi yezvinhu cUPC- uye NSF 61-inosimbiswa. Iyo yekugezera faucet yakaiswa nickel yeWOWOW inoratidzika yakasimba splashfree rwizi. Kunze kwezvo, iwe hauzocherechedze chero zvigunwe zvinotsikisa pamusoro peiyi imba yekugezera faucets. Zviri nyore kuchenesa uye saka zviri nyore kuchengetedza. Nenzira iyi iwe uchave uine unobhururuka br briti nickel yekugezera faucet kwenguva yakareba.
Mutengo unoshanda-imba yekugezesa faucet yakaiswa nickel
WOWOW yekugezera faucet bronze nickel yakapera neyakagadziriswa nehunyanzvi hwekugadzira kuti upe iwe kunakidza nguva uye kutsungirira. Uye izvi zvese nemutengo unodhura. Pamusoro pezvese, iyo ABS-aerator inokusevha iwe 50% mvura, saka iwe uchaona izvi padhiri yako yemvura zvakare. WOWOW saka inobatsira iwe kuchengetedza munzira dzakawanda.
Kunze kwemutengo unokwezva uye mvura-inoisa mvura, ino yekugezesa faucet bramm nickel iri zvakare nyore kuisa. Iyi 4-inch Centerset yekugezera faucet inogona kuiswa mune yakagadzirirwa 3-hole gomba rekunyura inonyura. Iyi yakarongedzwa imba yekugezera faucet bramm nickel inosanganisira pop up yekumisa zvakare. Zvese zvekuisa zvinhu zvinouya zvinosanganisirwa nefeucet. Iyi yokugezera faucet brusiti nickel inogona nyore kuiswa nemirairo yakajeka yekuisa. Kunyangwe iwe usiri nyanzvi. Nenzira iyi iwe unogona kuchengetedza kunyange mamwe madhora.
Kutumirwa kwemahara uye 90-zuva rekudzoserwa mari vimbiso
Sezvo WOWOW inomira yezvigadzirwa zvayo uye ichigutsikana nezve kunaka kwemafuti ayo, mwaka wemakore matatu waranti inopihwa neyekugezesa faucet bramm nickel. Kana iyo yekugezesa faucet yakashambadzirwa nickel yeWOWOW isingazoite kusvika zvakapfuura sezvakavimbiswa, iwe uchagashira nyowani yekugezera nyowani faucet bramm nickel pasina dambudziko.
Kunze kwezvo, WOWOW inokupa iwe unobatanidza 90-day zuva rekudzoserwa mari vimbiso. Paunofunga kuti hatina kukuendesa izvo zvatakapihwa, unogona kutumira imba yako yekugezha kudzokera kwatiri pasina mibvunzo yakabvunzwa. WOWOW inomirira kuchengetedza izvo zvakavimbiswa, uye kana iwe usina manzwiro iwayo, isu tinotora mutoro wedu kune izvozvo. Tichingogamuchira imba yekugezesa brucher nickel back, iwe unozodzosera mari yako nekukasira!
Sezvazvigadzirwa zvese zveWOWOW, iyi faucet yekugezera yakashambadzirwa nickel ichaendeswa pachena kune chero nzvimbo pasi pano. WOWOW ine vateereri vakawandisa pasi rese uye vese vanoonga iyo inodhura-inobudirira mhando WOWOW inofanira kupa. Tinoda kuti iwe uedzewo chigadzirwa chedu. Uye tine chokwadi chekuti hauzomboda kuchinjazve kune mamwe madhiri zvakare.
Zvakanakira iwo Bathroom Faucet Akabhururuka Nickel muchidimbu:
 Chimiro chechinyakare uye nanhasi
 Ruoko-ruoko rwakabikwa br nickel kupedzisa
 Chiri nyore kusanganisa nemamwe mafiriji ekugezera
 Yakakwira performance bath faucet
 Yakagadzirwa neyemhando yepamusoro michina
SKU: 2321200 Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: 4 padiki, Bronze Nickel, Kuparadzanisa Kubata
NSF ceramic disc valve, sanganisa mvura, 3-hole 4 mukati. Centeret dhizaini, nyore kuisa
Zingi chiwanikwa / Stainless simbi / Brass
Deck akatasva, 3 mugomba kugadzwa 4 padiki centeret
Kuruboshwe uye kurudyi
Mvura inopisa uye inotonhorera zvakasiyana kudzora
Kupisa uye kunotonhora kudzora mvura
Bhegi * 1, Kuisirwa yakatarwa * 1, Pop-up Drain Stopper * 1
Sink chaiyo yandaida. Ndakaenda kuzvitoro zvishoma uye handina kuwana chero chinhu chandaida. Izvi zvaive nyore kwazvo kumisikidza, uye inouya nezvose zvaunoda kusanganisira zvekubatisa hosipaipi uye dhurena. Nyore kuchenesa, yakabata kumusoro kune vana, haigone kukumbira zvimwe.
Iyi ipombi yakanaka inotaridzika yakauya nezvimwe zvezvikamu zvataida kupfuura zvataitarisira. Isu hatina kufanirwa kuenda kuchitoro kunotenga pasi pemasink zvikamu izvo dzimwe nguva hazviuye nepombi. Isu takafarirawo mutengo wechinhu ichi. Tainzwa sekunge tine chibvumirano chakanaka.
Ini ndakatenga izvi ndichitsvaga chimwe chinhu chakachipa. Ndakashamisika kuti rairema sei uye remhando yepamusoro raivapo pandakaivhura. Vanotaridzika vakakura, uye nechikamu chemutengo wemakambani anotungamira.
zvakanditorera maawa maviri kuti ndiise-mapombi maviri ekare ekugezera. Iyi yakagadziridzwa zvirinani, kwete chete ini ndinogona kuiisa mu ~ 2 min, asi zvakare ndinotenda kuti ndinogona kuiisa-isingasviki gumi nemashanu kana ichidikanwa mune ramangwana. Ini ndanga ndichinyatso kunetseka kuti nei mapombi ekare aifanirwa kugadzirwa zvakaoma kubvisa.
Ndakafadzwa zvakanyanya neiyi faucet. Inorema, inobata bata, yakanaka kuyerera kwemvura uye ipombi dzemhando yepamusoro. Ini ndaive leary, kwete chairo chiratidzo chandinoona byt ndinoshamiswa. Unogona kuzotenga chigadzirwa ichi zvakare.
Anotyisa yekugezera singi pombi. Zvese zvinhu zvaisanganisira kuti kumisikidza kuve nyore. Ida kutaridzika uye kunzwa kwefaucet yangu nyowani!
Bhegi iri raive chaizvo zvandaitsvaga ndichironga zvekugezesa. Vakaifarira zvakanyanya kwatenzi wedu wekugeza zvekuti ndakaitengazve yemukuru. Iyo yakapfava uye yakashongedzwa. Uyezve mutengo wakarurama. Yakapfuura zvandaitarisira
Chigadzirwa chakanakisa, chinotaridzika zvakanaka kwazvo uye chiri nyore kuisa. Kupakata kwaive kwakanaka, kunodzivirira chigadzirwa. Ini ndinonyatsoda iyo yepamusoro nhanho pombi kuitira kuti ugone kupinza maoko ako pasi. Kupedza kwakanaka kwazvo, kwakasimba.
Yakanaka kwazvo faucet uye zvakare ma accesories ayo aakasangana nawo. Iwo akarukwa ekupa hoses akanaka, akareba (20 ″ kuwedzera) uye zvakaringana rinorema basa, uye iyo drain zvakare iri batsira yekuwedzera!
Ndiri kufara chaizvo nekutenga uku, pombi inotaridzika uye inonzwa yakasimba pamutengo. Pamusoro pezvo iwe unowanawo mitsara inochinja iyo yaive yakasimba mhando… .BUT Mirira! hazvisi izvo zvese, iwe unowanawo pop-up vharafu yerudzi iyo zvaive nyore kuisa mukati, zviri nyore kushandisa uye inotaridzika zvakanaka zvakare. Hapana chekudemba.
Isu takada pombi iyi. Iyo yakauya Yakazara nekudonha uye fittings yemvura hookups. Ini ndaizo hodha chigadzirwa ichi zvakare
Iyi yakanaka uye yakapusa kuisa pasuru. Iyo inouya nezvose zvaunoda kuisa. Yakatora maminetsi mashoma ekuisa uye inotaridzika uye inoshanda zvakanyanya. Ini ndichave ndichitenga imwe.
Nekuti iyo yaivepo yekuchenesa pombi yekumvura yaive yekungove pedyo nekhawunda uye mvura ichibuda kubva musinki. Ndakatenga chidimbu ichi. Zvakawanda zvakanaka kupfuura izvo zvakauya mumusasa wedu uye zvaizokodzera kushandiswa mumba medu. Unofara nekutenga uku.
Yakanaka uye yakanaka mutengo. Nyore kubata. Ida vharuvhu inosunda. Aive asina kana kuziva kwekuuya nayo.
Bhegi iri rakashanda zvakanaka uye nemutengo uri nani kupfuura chero chitoro padhuze neni. Zvaive nyore kuisa uye zvinotaridzika zvakanaka.
Ndakafara kuwana izvi pamutengo wakakura kudai. Hunhu hunoenderana nemutengo asi unoshanda nemazvo kuchimbuzi chemwana wedu.
Dai ndaigona kukambaira musinki yangu ndonzwa simba riri seri kwepombi iyi ndaidai. Ini ndinonzwa sekunge maoko angu anowana rubhabhatidzo pese panobva mvura kubva kuna Mwari akatumira pombi.
Isu takaisa 2 yemwedzi miviri yapfuura ..
Izvo zvinotyisa! Ivo vakatsiga kwazvo uye hunhu hunokosha !!
Ini ndakatenga matatu seti eaya ekunyura faucet seti. Ndingadai ndakashandisa zvakapetwa zvakapetwa asi ndakanga ndisina mubhajeti rangu. Aya ndiwo akanaka mhando uye anotaridzika zvakanaka. Ini ndaive nehunyanzvi hwekuisa pombi uye akati ivo ndeimwe yemaseti akanakisa aakaona. Ungakurudzira zvakanyanya.
Ini ndaishandisa izvi kukwidziridza dzimba dzangu dzekugezera. Izvo zviri nyore kuisa uye kushanda mushe. Ndinofarira mashandiro avo akanaka
Yakanakisa pombi yekugezera yandakatenga! Unoshamisa mutengo, nyore kuisa kudhirowa kutarisa, kunoshanda zvikuru!
chigadzirwa chikuru. kana uchida imwe gare gare zvirokwazvo ichatenga imwe uye ndokuiisa inotaridzika zvakanaka.
Yakakura yekutsiva pombi yekumusoro yekugezera. Kuisa nyore, uye inoshanda pasina zvipingaidzo. Kutarisa kutenga zvakafanana kune yekumusoro yekugezera inotevera.
Ini ndaisafanirwa kutenga chimwe chinhu kutsiva pombi yangu yekugezesa. Kutarisa kwakanaka. Kukosha kwakanaka.
Hunhu uye kukosha zviri # 1 nechinhu ichi. Yakapusa nyore kuisa uye zvese zvaunoda pakuisa zviri mubhokisi. Iwe haugone kurova izvo kumwe kunhu.
Takatenga matatu eaya emabafa edu ese ekugezera. Ini ndinoda iyo yekumisa yekumisa. Iri bhatani vs sikuruwa pachinhu. Inoita kuti itaridzike yakachena zvakanyanya uye nyore kushandisa. Pakazara, yakapfava uye akasiyana dhizaini.
Yakaiswa mumaminitsi makumi matatu. Simudzira kubva kunze kwekare uye zvaive zvakanaka kufunga kuti imba yedu yekugezera ive yemazuva ano
Ida iyo yekushongedza uye iyo brushed nickel kupera. Nyore kuisa. Ndine dzimba dzekugezera nhatu uye ndine pombi iyi mune ese.
Takatenga izvi kutsiva uye pombi dzekare mune isingawanzo shandiswa yepasi pekugezera. Yakauya nezvose zvandaida pabasa racho. Ndakafadzwa nehunhu hwepombi iyi.
chigadzirwa Chakanaka kwazvo! Ndakashamisika nekugadzirwa kwayo zvakanaka. Ini ndichave ndichitenga imwe zvakare yeimwe yangu yekugezera.
Ndakachinja matenzi ese ekugeza uye yaive mhepo. Zviri nyore kuisa uye zvinotaridzika zvakanaka chaizvo uye pamutengo iwoyo ini ndichachinja dzimwe dzimba dzekugezera futi.
Zviri nyore kuisa, zvemazuva ano, uye zvisingadhuri. Inotaridzika inotyisa muhafu yangu yekugezera.
Kukosha kukuru kunotaridzika kunodhura uye kunoshanda kwazvo. Kukosha chaiko kwemari ini ndinokurudzira izvi kana iwe uchida pombi nyowani kana kungo tarisa kukwidziridzwa
Isu taida pombi yekufananidza kugeza kwedu uye zvitoro zvedu zvemuno hazvina zvataida. Bhegi iri rinoshanda zvakakwana! Zviri nyore kuisa uye yakatarisa kirasi yepamusoro
Ndakatenga imwe yemapombi aya uye ndakaifarira zvekuti ndakatenga mamwe maviri kune mamwe mabhavhu ekugezera. Yaive nemutengo unonzwisisika uye yakachenesa dzimba dzangu dzekugezera! Chigadzirwa chakasvika nekukurumidza uye muchimiro chakanakisa. Anoshamisa pombi ini ndinokurudzira zvikuru pombi iyi!
Mutengo waive chaiwo uye zvaive nyore kuisa. Ndiri kufarawo kwazvo nemabatiro arinoita uye kunaka kwarinoita. Pombi chaiyo yakanaka uye inotaridzika zvakanaka. Yakanaka yakapusa kuisa